धर्ती माताले फेरि गरिन नेपालको यस्तो भबिस्यवाणी, के हुदैछ नयाँ बर्षमा? – भिडियो हेर्नुस् – KHABAR TIME
Video खबर जीवनशैली पत्रपत्रिकाबाट भिडियो
March 27, 2020 Khabar Time1 Comment on धर्ती माताले फेरि गरिन नेपालको यस्तो भबिस्यवाणी, के हुदैछ नयाँ बर्षमा? – भिडियो हेर्नुस्
उनकी आमाको मृत्यु भइसकेको छ भने उनले बाबुको नाम सञ्चार माध्यममा गोप्य राखेकी छिन् । उनीहरुको परिवार बसाइसराइ गरेर रुपन्देहीतिर गएको ८–९ वर्ष भएको उनका दाजु पर्ने पनाहका बलभद्र कुँवरले बताए । ‘विष्णुले यहीँ पढेकी हुन्, उनका बाबुले अर्की श्रीमती विवाह गरेका छन् भन्ने सुनेको छु तर देखेको छैन,’ कुँवरले भने ।
त्यो बेलामा धेरै घाँस काट्न नसकेपछि ढिकाबाट घचेडेर तलसम्म झारेको भर्खर जस्तो लाग्छ । सायद त्यही भएर पनि होला भगवानकी प्यारी भएर रुखमुनी बसेर संसारको ज्ञान लेखे, संसारको ध्यान लेखेँ । मान्छेहरु ठगी खाने माता भन्छन् । मैले धेरै पैसा बैंकमा राखेको रेकर्ड छैन । दाजु भाईले दिएको चारपाँच तोला सुन छ ।
February 12, 2020 Khabar Time
1 thought on “धर्ती माताले फेरि गरिन नेपालको यस्तो भबिस्यवाणी, के हुदैछ नयाँ बर्षमा? – भिडियो हेर्नुस्”
DHRISTA KUMAR RASAILY says:
Pls, give your phone no Mata ji.